BALADWEYNE:- Gacan ku dhiigle Lasoo qabtay. |
BALADWEYNE:- Gacan ku dhiigle Lasoo qabtay.
buy Super Kamagra online, purchase zithromax. Nin dhalinyaro ahaa, ayaa xalay waxaa lagu dilay Xaafada Xaawo Taako ee Magaalada Beladweyne, waxaana dilkiisa ka dambeeyay wiil kale oo dhalinyaro ahaa oo ay isku xaafad ahaayeen.
Wiilka la dilay, ayaa waxaa lagu magacaabi jiray C/fataax Shig shigoow, waxaana dilka ugeystay Wiil kale oo bilo kahor tooreey uu ku dhuftay C/fataax Shik-Shikoow, balse arinta markii dambe laga heshiiyay oo la isku cafiyay falkaasi.
C/fataax Shik-Shikoow oo xalay kusii jeeda Aqal ay degan tahay Ayeeydiis oo ku yaala Xaafada Xaawo Taako ee Magaalada Beladweyne, ayaa waxaa ka hor yimid Wiilkii uu mindida geliyay bilo kahor oo wata Qori Ak-47 ah, waxaana rasaas lagu harqiyay C/fataax Shik-Shikoow uu durba meesha ku nafbaxay.
Ciidamada Booliiska Magaalada Beladweyne oo goobta ka agdhawaa ayaa maqlay dhawaqa rasaasta, waxaana ay ku baxeen goobtii uu ka dhacay falkaasi, iyaga oo gacanta kusoo dhigay gacan ku dhiiglaha falka dilka ah geystay iyo Qorigii uu falkaasi ku fuliyay.
Gacan ku dhiiglaha, ayaa waxaa lagu xiray Saldhiga Magaalada Beladweyne, waxaana Saraakiisha ammaanka ay sheegeen in ninkaan lasoo taagi doono maxkamad si loo marsiiyo sharciga.
Ehelada Marxuumka la dilay ayaa si aad ah uga naxay falkaasi dilka ah ee Wiilkooda loo geystay, maadaama arinta loo dilay ay tahay mid horay looga heshiiyay oo laga soo gudbay.
Dilalka Aanooyinka ah ayaa ka dhaca Gobalada dalka Soomaaliya, maamulka Magaalada Beladweyne, weli arintan kama aysan hadlin.